लुइसियाना (LA) सजिलो5बुधवार, जुलाई २२ नम्बर (परिणाम) | लटरी.कट
परिणाम > louisiana > Easy5> 07-22-2020
बुधबार, जुलाई 22, 2020 लुइसियाना ईजी Winning विजयी नम्बरहरू र नतीजाहरू
तपाईं बुधवार, जुलाई १,, २०२० यस पृष्ठमा लुइसियाना ईजी for को लागि विजयी नम्बरहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ एक पटक चित्र कोर्ने क्रममा। पछिल्लो लटरी जानकारीको साथ अद्यावधिक रहनको लागि, हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
सबै पछिल्ला २०२० एलए इजि 2020 परिणामहरू हेर्नुहोस्
लुइसियाना लोटरी खेलहरू
लोट्टो १०:१२ अपराह्न सीएसटी १--6 देखि जैकपोट १०:१२ अपराह्न सीएसटी बुधबार र शनिवार
Easy5१०:१२ अपराह्न सीएसटी १--5 देखि जैकपोट १०:१२ अपराह्न सीएसटी बुधबार र शनिवार
3 छान्नुहोस् १०:१२ अपराह्न सीएसटी १--3 देखि जैकपोट १०:१२ अपराह्न सीएसटी शीर्ष पुरस्कार
4 छान्नुहोस् १०:१२ अपराह्न सीएसटी १--4 देखि जैकपोट १०:१२ अपराह्न सीएसटी शीर्ष पुरस्कार
लुइसियाना लॉटरी प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
के म गुमनाम रहन सक्छु यदि मैले लुइसियानामा लटरी जितें भने?
ला लाटरीको विधान अन्तर्गत, सबै पुरस्कार भुक्तान रेकर्डहरू खुला रेकर्ड हुन् र जनतालाई त्यस्तो जानकारी अनुरोध गर्ने अधिकार छ। कानुनले पनि लोटरीलाई विजेताहरूको नाम र प्रचार उद्देश्यका लागि निवास शहर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
आज ला लॉटरी कति छ?
तपाइँ यहाँ भर्खरको ला लटरी ज्याकपॉट रकमहरू तपाइँका सबै मनपर्ने खेलहरूका लागि लोटरी.कटमा पाउन सक्नुहुन्छ लुइसियाना लॉटरी ज्याकपट्स पृष्ठ.
यदि मैले ला लॉटरी जितें भने म कति करहरूमा तिर्ने छु?
$ 5,000 वा सोभन्दा बढीको पुरस्कार राज्य कर रोकिन्छ to% र संघीय कर रोकावटको अधीनमा २ 5%।
LA लॉटरी जित प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
$ 600 सम्म पुरस्कार प्राय: एक अधिकृत खुद्रा विक्रेता मा तुरून्त दावी गर्न सकिन्छ। ठूला पुरस्कारहरू, जस्तै ज्याकपट्स, लॉटरी हेडक्वार्टरमा दावी हुनुपर्दछ र प्रक्रिया र दावी गर्न अधिक लिने छ।
के म LA लाटरी टिकट अनलाइन खरीद गर्न सक्छु?
लुइसियाना लोटरीको बारेमा
आधुनिक एलए लटरीको कर १ 1991 1990 १ मा कानुन पारित गरिसकेपछि १ XNUMX XNUMX ० मा शुरू भएको थियो जसमा लोटरी बनाउने हो कि यसले कर बढाउँदैन भने राज्यको राजस्व बढाउँदछ।
लुइसियाना लोटरी आफ्नो सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको राजस्वको प्रतिशतमा अन्य अमेरिकी क्षेत्राधिकार लोटरीहरूमध्ये दोस्रो स्थानमा छ। कम्तिमा LA 2% सबै एलएल लॉटरी राजस्व राज्य कोषमा हस्तान्तरण हुन्छ। २०० 35 मा, लुइसियानाको संविधानले यस्तो बनायो कि लोटरीबाट प्राप्त न्यूनतम फाउन्डेशन प्रोग्राम (एमएफपी) को लागी राखियो, जसले राज्यमा के -१२ सार्वजनिक शिक्षालाई फाइदा पुर्‍याउँछ। थप रूपमा, वार्षिक लोटरी आयमा पहिलो $ 2004 समस्या जुवा कार्यक्रमहरू कोषको लागि छुट्याइएको छ। २०१ fiscal आर्थिक वर्षसम्ममा लटरीले $. billion अर्ब डलर भन्दा बढीलाई राज्य कोषमा हस्तान्तरण गरिसकेको थियो र १12. million मिलियन डलर भन्दा बढीको मात्र आर्थिक वर्ष २०१ in मा बिक्रीबाट ट्रान्सफर गरिएको थियो।
लुइसियाना राज्य लोटरीको बारेमा अधिक जान्न कृपया अधिकारीलाई भेट्नुहोस् वेबसाइट.